Mitohy hatrany kosa ny fanoratana tantara ho an’i Madagasikara na efa raraka tany amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana aza. Azontsika tamin’ny alalan’ny mpanazatra Nicolas Dupuis indray mantsy ny amboara ho an’ny mpanazatra mendrika indrindra tamin’iny CAN iny na ny “Trophée OFC”. Nisy ny karazana fifidianana nataon’ny Orange Foot-ball Club tamin’ny alalan’ny tranonkala, ka anisan’ny voasafidy ho mpifaninana ity mpanazatra ny Barea ity. Efatra izy ireo no nifaninana dia ny mpanazatra an’i Algérie djamel Belmadi nahazo ny laharana faharoa, i Aliou Cissé mpanazatra an’i Sénégal no faha-3 ary ny mpanazatra an’i Tonizia Alain Giresse kosa no faha-4. Voasokajy ho mpanazatra tsy manam-paharoa noho ny fahaiza-manao sy ny teknika nentiny niatrika ity fifaninanana goavana ity i Nicolas Dupuis. Nanome aina tanteraka ny CAN 2019 tamin’ny alalan’ny Barea na teo amin’ny endri-dalao sy ny fampisehoana nentiny na teo amin’ny fampiainana tanteraka ny fifaninanana tamin’ny alalan’ny ekipam-pirenena Malagasy, ka nitarika ny mason’izao tontolo izao hitodika tatsy Egipta.
Resin’i Nigeria tamin’ny 1 – 0 omaly i Tonizia tamin’ny lalao famaranana kely ao anatin’ny CAN 2019.Ny Super Eagles Nizerianina izay efa resin’ny Barea 2 – 0 izany no laharana fahatelo amin’ity fifaninanana ambony indrindra amin’ny kitra Afrikanina ity.